Indoda ishonele eMoscow! Uzoya kuphi usizo? Ngeshwa, le nkinga isanda kufinyeleleka nje. Iqiniso liwukuthi namuhla ukulahleka e-megalopolis enkulu yindaba elula futhi evamile. Abaningi bathunyelwa ukusebenza enhloko-dolobha, nokuthi bangakhathazeki kanjani ngomngani wabo, bangabi nhlobo isihlobo, uma engaphenduli izingcingo ezinsukwini ezimbalwa ngenkathi ehlala e-White-stone.
Into esemqoka ukuhlala uzolile
Izibalo zibonisa ukuthi minyaka yonke abantu abangaphezu kwezingu-10 000 baphendukela ezinhlanganweni ezifanele ngezitatimende zokulahlekelwa kwabantu. Kodwa ngamacala angu-50% umbuzo: "Indoda ishonele eMoscow. Uzofaka kuphi? "- isusiwe kakade amahora amabili ngemva kokucela okunjalo. Omunye umane nje uhlanza futhi uyakhohlwa ngokuphelele isikhathi. Futhi othile wayenomakhalekhukhwini, futhi wayengenakubiza izihlobo nezihlobo zakhe.
Kuhle uma iphetha ngomphumela ofanayo, kodwa akuhlali njalo. Yini okufanele yenzeke? Ngokwemvelo, ukufuna usizo ezinhlotsheni ezikhethekile. Kodwa ngaphambi kokuba ubuyekeze izinhlangano, ukuthi ungaphi, uma umuntu elala eMoscow, kungaba okungcono ukunikeza isincomo esisodwa esibalulekile - ungesabi futhi ulahlekelwe ukuqiniswa. Zama ukuzola. Kungenzeka ukuthi ungakwazi ukuzimela ngokuzenzekelayo umuntu olahlekile ngaphandle kosizo olungaphandle. Ukuze wenze lokhu, qaphela lesi sigaba esilandelayo.
Shayela inombolo yocingo yomuntu oyifunayo
Ngokusobala, umbuzo: "Indoda ishonele eMoscow. Ngingaphi lapho? "- kungaba nesisombululo sokuqala. Mane ushayele umuntu ongeke uxhumane naye isikhathi eside. Uma engaphandle kwendawo yokufinyelela, zama ukuxhumana nezihlobo zakhe eziseduze: mhlawumbe omunye wabo uyazi lapho umngane wakho noma owaziyo khona.
Izimo zokuphila zihlukile, futhi kungenzeka, isibonelo, ukuthi umngane wakho kufanele ahambe ngezinsuku ezimbalwa kwelinye idolobha, futhi nje ukhohlwa ukuthatha ifoni naye.
Kukhona isakhiwo esisodwa, esimweni esiningi esisiza ukuthola impendulo yombuzo othi: "Indoda ishonele eMoscow. Uzoya kuphi? "Ubizwa ngokuthi" ihhovisi lezingozi "(ikheli: 20 Shchepkina St.). Uma ungenayo isikhathi sokuza "i-Bureau" ngomuntu, ungabiza inhlangano kule nombolo yocingo elandelayo: 8- (495) -688-22-52. Yonke imininingwane ekutholeni izindikimba ezingaziwa, mayelana nezisulu ezithathwe emipolyclinics futhi ezingenalo ithuba lokukwazisa izihlobo zazo mayelana nokuthi ziphi, ziqoqwe ku-BRNS. Ngamanye amazwi, i-"Bureau" inolwazi oluphelele kakhulu ngomuntu oza ngokuphathelene nengozi ezibhedlela, ezivela ezigayini, ezinyunithi zamaphoyisa.
Isisebenzi efonini kufanele sitshele ngokuningiliziwe ngenkinga yakhe. Ngesikhathi esifanayo, njengoba kugcizelelwe kakade, umuntu akufanele alahlekelwe ukuzithiba futhi achaze isimo ngezwi elicacile. Manje uyazi ukuthi yini okufanele uyenze uma umuntu elahlekile eMoscow, lapho uzoya khona futhi abize. Kodwa kungaba okungenakuqhathaniswa ukwenza umzamo owengeziwe wokuthola umngane wakho noma isihlobo. Kubalulekile ukushayela i-ambulensi "03" bese uthola ukuthi umuntu onentshisekelo ungene esikhungweni.
Futhi-ke, kunendlela ejwayelekile kunazo zonke yokuxazulula umbuzo: "Yini okumelwe yenziwe uma umuntu elala eMoscow, ukuthi uzoya kuphi?" I-ATS yilawo mzimba onguchwepheshe ekufuneni abantu abanyamalalayo. Ikheli lomnyango wamaphoyisa endaweni eyinhloko lapho uMnu Kh ahlala khona kamuva. Uma ungenalo ulwazi olunjalo, shayela "02" bese usitshela ngale nkinga ngokuningiliziwe. Njengoba ufunde ikheli nenombolo yocingo yomnyango wezangaphakathi wezindaba zangaphakathi, ungacabangi ngomsebenzi uqobo ukuze ufike enkambweni yomsebenzi. Noma kunjalo, umuntu kufanele akhumbule imigomo yomthetho, elawula inqubo yokuthola abantu.
Ngokomthetho kufanele kuqale izinsuku ezintathu kuphela emva kokulahlekelwa ngumuntu. Kodwa ochwepheshe bakholelwa ukuthi ngokusebenza umuntu onomsebenzi kufanele amukele isicelo esivela esakhamuzi, kungakhathaliseki ukuthi sekuyisikhathi eside kangakanani ukunyamalala komuntu. Uma isisebenzi senqaba ukubhalisa iqiniso lokulahlekelwa ngumuntu, kufanele akhononde ngezenzo zakhe eMnyangweni wezokuPhepha koMbuso weMnyango Wezangaphakathi zaseRussia.
Uma kwenzeka isicelo sakho samukelwa, ke ngaphezu kwalokho kufanele unikeze ipasipoti yakho (isitifiketi samanzi), ikhophi yepasipoti yelahlekile (impi, ikhadi lomfundi), isithombe somuntu olahlekile, ikhadi lakhe lezokwelapha (uma likhona). Isitatimende kufanele sichaze ngokuningiliziwe futhi ngokuningiliziwe ngezimo lapho kwaziwa khona ukuthi umuntu owaziyo ulahlekile. Kufanele uyihlathulule, bonisa ukukhomba (okuhlukile) izimpawu, isibonelo, izibazi, izithombe.
Qaphela ukuthi ngisho noma encane kunazo zonke, ngokombono wakho, imininingwane ingaba usizo kubaphenyi. Ngemuva kokuba umuntu osebenzayo esamukela isicelo, kubalulekile ukulinda ukukhishwa kwesigqebhezana, okuqinisekisa ukuthi ukubhaliswa kwesibheno esibhaliwe. Ngezinye izikhathi, cela umphenyi ngemiphumela yokusesha.
Uma ungafundile ngokungazi ukuthi umngane wakho noma isihlobo sakho esasilahlekile ube yisisulu sezigebengu, kufanele uxhumane ngokushesha nehhovisi lomshushisi.
Ngakho-ke, umbuzo wokuthi ungayisebenzisa kuphi, uma umuntu esanyamalala eMoscow, saxoxa. Kodwa emva kokuphothulwa kwazo zonke izinqubo ezihleliwe, kubalulekile ukuqapha isimo.
Ngokukhethekile, ungabi nobuvila okungenani kanye njalo ngemva kwamasonto amabili ukubiza i-BRSN futhi ube nesithakazelo kulokho. Ngikholelwa, akwanele ukwazi ukuthi benzeni uma umuntu elahlekile eMoscow, lapho angabiza nalapho uya khona. Kubalulekile futhi "ukugcina umunwe wakho phezu kwe-pulse," kungenjalo kungenzeka ukuthi izinyanga ngeke ube nolwazi oluvela kubaphenyi. Kufanele ubize futhi ube nesithakazelo ekuthuthukiseni ibhizinisi, ngoba bangakwazi ukukhohlwa ngawe ngenxa yomsebenzi wabo omatasa futhi omatasa. Uma uzikhumbuza, ulwazi luzohlinzekwa kuwe, kokubili ngomlomo nangokubhala. Uma kwenzeka umphenyi enqaba ukwenza lokhu ngenxa yezizathu ezithile, ungakhononda ngezenzo zakhe kumphathi ophakeme kumuntu oyinhloko.
Ukuze usheshe ukusheshisa inqubo yokucinga, qaphela njalo izihlobo zakho ezigqoke lapho zisuka endlini. Futhi, akuthola kunzima ukubabuza ukuthi baya kuphi nokuthi uma behlela ukubuya.
Futhi-ke, njalo unesithakazelo emaqenjini ezingane zakho. Zama ukungabashiyi ngaphandle kokulindela futhi ungabanikeli ekuphathweni kwabangane babo nezihlobo abalahlekelwe yimemori. Ukusheshisa ukusesha komuntu olahlekile, imizimba ye-PVS isebenza ngensizakalo yezinhlamvu zeminwe, engeyona kuphela kubantu abadala, kodwa nakwabantwana. Ekupheleni kwenqubo umuntu uthola i-daktokartu.
Isikebhe sephrofayela yensimbi yebhodi ye-gypsum: izici zokufaka, izinhlobo nezibuyekezo